चौतारामा गाडी दौडिएको हेर्दे स्वास्नीको सिउँदो र आफ्नो सिउरमा हातैले कालो दल्न थालेछन् । एकले अर्काको रौँ खोजी खोजी अमिलो चुक र औँसीको रातझैँ कालाम्य तुल्याएछन् । कपाल सुकेर दरो ठाडो जिङ्ग्रिङ्ग दुवै जना तर्साउने भूत जस्ता डरलाग्दा देखिएछन् । सहरमा टाउको पखाल्न ढुङ्गेधारोको खोजीमा चार पाँच किलोमिटर वरपर कतै ओखती हुन्छ भने पनि ढुङ्गेधारो फेला पारेनन् । सबै आधुनिकतातिर ढल्किसकेछन् । सायद यो पनि एउटा विकास होला । श्रीमतीलाई परिमार्जन गर्न चाहे जस्तै अरूलाई पनि ढुङ्गेधारो पटक्कै रुचेन होला । सबै उखेलेर फालेछन् । सहरका खोलाको पानीले नुहायो भने अख्तियारले झैँ रोगले क¥यापच्याप पार्छ भन्दा रहेछन् । पछाडमा त खोलाको पानी खाने नुहाउने सबै सर्लक्क चल्थ्यो । यहाँ भने जलाश्यलाई छिछि दुरदुर । अछुतो भएछ । किन त्यसो गरेका होलान् ? बुढियाले सोधिन् । उनले भने जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ, जता मन लाग्यो त्यता, जसले मन लाग्यो त्यसले, जति मन लाग्यो त्यति, जहिले सुकै जहाँ पनि विष्ट्याएर हो क्या । ए ! हामी त जङ्गलका विच्चमा गएर गर्छाै । त्यही भएर हाम्रो खोला नाला सफा हुन्छ । यहाँ त जङ्गल पनि छैन । खोला नाला पनि लाटा जस्ता नकराई बग्दा रहेछन् । मान्छेहरू पनि एउटै घरका एक अर्कामा नबोल्दा नै आफूलाई सभ्य ठान्दा रहेछन् । सहरका धेरै कुरा मलाई रुचेन है चित्रेका बाऊ । तिमी काँ जान्छौँ जाऊ मलाई एक चोटि ब्युटीपार्लर देखाउन लैजाऊ ।